tweetmeme.com မှာ XSS ရနေတယ် — MYSTERY ZILLION
tweetmeme.com မှာ XSS ရနေတယ်
September 2009 edited September 2009 in MZ News
မှာ XSS ရနေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပလန်းနက်ကြီးမှာ တွေ့တဲ့ XSS ပါ.. ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကပါ။ ကြုံတုန်း တင်လိုက်တာ..
PlanetCreator has reported another critical XSS vulnerability on planet.com.mm, owned by Inforithm-Maze. Planet Myanmar Network.
It is possible to inject other malicious scripts and infect users with crimeware. We hope that their security staff will look into this issue and fix it as soon as possible.
This Vulnerability has been informed to [email protected]
Reported at XSSED
__utma=229010307.1429998862.1253598934.1253598934.1253598934.1; __utmb=229010307.1.10.1253598934; __utmc=229010307; __utmz=229010307.1253598934.1.1.utmcsr=mysteryzillion.org|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/forums/showthread.php
ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မလဲ မသိဖူး..အဟီး :P:P:P
မဘန်းလိုက်နဲ ့အုံးတားကို။ ။
နှိပ်လိုက်ရင် alart လေးတစ်ခု တက်လာတယ်ဗျ
url မှာလည်း ကွတ်ကီးဆိုတဲ့ဟာပါတယ် ကိုယ်user name တောင်ပါသေး
တယ်ဟုတ်ပါလားပေ့ါ ငါ့နာမည်ကြီးနဲ့ ၀က်ဆိုက်ကြီးဟ
ပြောပြပါ အဲဒီကွတ်ကီးက ဘယ်ရောက်သွားမှာလဲဟင် ဘာဆက်လုပ်လို့ရကြလဲ
ဒီလူကြီးတွေကလည်း ကလေးကလားနော် ကွတ်ကီးတဲ့ ဟီဟီး
ဘီယာနဲ့ သီဟိုစေ့လေးဆို တော်သေးတယ်:P:P
i see at also mutdfan, when member login, alart show php session id